Kawaran haddii Suuqgeyntaadu shaqeyso? | Martech Zone
Anigoo ah tababaraha iibka waxaan la shaqeeyaa shirkadaha warshadaha kala duwan. Iyo ku dhowaad shirkad kasta oo aan la shaqeeyo waxay ku bixineysaa sanadkan mid ka badan kii ugu dambeeyay ee suuq-geynta internetka, oo ay ku jiraan warbaahinta bulshada.
Nasiib darrose qaar badan oo ka mid ah shirkadahaas, suuqgeynta internetka ayaa bilaabeysa inay shaqeyso waxayna helayaan wicitaanno iyo emayllo ka yimid iibsadayaal dhiirrigelin leh oo ka helay kuna raacay internetka. Laakiin iyagu waxay ogaanayaan isbeddel dhib leh, suuqgeyn ayaa abuuri karta hoggaan laakiin kooxaha iibka ay dhibaato ka haysato sidii hore weligeed.
Rajooyinka internetka ma ahan dadkii aad ka iibinaysay 3 sano ka hor. Dadkaas laga soo bilaabo 3 sano ka hor runti wax yar ayey kaa ogaayeen runti ma aysan aqoon waxa aad iibisay iyo sida aad u iibisay. Wax fikrad ah kama haysan waxa aad si sax ah u qabatay ama wax fikrad ah oo ku saabsan waxa aad si liidata u qabatay. Xaqiiqdii, 3 sano ka hor markii aad su'aalo weydiisay dalabka ugu badan ee rajada laga qabo wuxuu ahaa 'ii sheeg waxa aad sameyso iyo sida aad u sameyso.? Rajada maanta ma rabto inay ogaato? Waxaad qabato iyo sidaad u qabato.? Taasina waxay keenaysaa kala-bax ba'an oo u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha hadda.
Rajada maanta ayaa kugu soo duushay, waxay ku booqatay boggaaga facebook, waxay kugula socotey twitter-ka waxayna ku aqrisay dib u eegista adiga kugu saabsan yelp. Iyagu way ogyihiin waxa aad sameyso, sida aad u sameyso iyo dhammaan faahfaahinta xun ee khaladaadka aad sameysay sanadkii la soo dhaafay. Waxay leeyihiin sabab ay kula soo xiriiraan oo ma ahan in loo akhriyo buug yare.
Rajada cusubi ma rabto inay wax kaa barato adiga-adiga. Inta badan way ogyihiin intaadan iyaga gaarin. Haddii suuqgeyntaadu ay abuureyso hoggaamiyeyaal kooxdaada iibintuna aysan xiri karin dhibaatada caadi ahaan maahan tayada hoggaankaaga. Dhibaatadu caadi ahaan waa tayada nidaamka iibinta ee aad u oggolaaneyso kooxdaada iibka inay isticmaalaan.
Haddii habka iibkaagu u qaabaysan yahay inuu dadka kaaga sheego waa khalad oo waxaad u baahan tahay inaad beddesho.
Hubso in meheraddaadu leedahay nidaam nidaamsan oo lagu ogaanayo sababta rajada ayaa kula soo xiriirtay. Markaad fahanto baahiyaha rajada, markaa runti waxaad gelineysaa meheraddaada meel aad ugu guuleysato iibsadayaasha maanta.
Tags: suuq geynta BluetoothWordPress